Kungani Kubalulekile ukuthola i-White Label SEO Partner?
Lokhu okuthunyelwe kunikezelwe kuwo wonke ama-ejenti afuna ukukhipha amandla okusebenza kwe-search engine kuthimba elimhlophe le-SEO ithimba. Namuhla, ochwepheshe be-Semalt bazochaza izinzuzo eziyinhloko zokukhishwa kwezimali futhi banqume ukuthi imodeli enjalo yebhizinisi ikufanele yini.
Ucabanga ukuthi ngabe ukusebenzisana ne-label white SEO umthengisi kulungile ebhizinisini lakho? Ukuphendula umbuzo olandelayo, kufanele sicacise ngeminye imininingwane kuqala. Ngakho, eduze nendawo.
Eminye yemibuzo evame kakhulu ukuthi ama-ejensi amancane naphakathi ajwayelekile lapho eqala uhambo lwabo ekuhambeni kwe-SEO yizinto ezilandelayo:
) 1. Ukuhlelwa Kwentuthuko Kusebenza Kanjani?
Into yokuqala okufanele uyiqaphele lapho ukhetha inkampani yokukhishwa kwezimali kungakhathaliseki ukuthi ithimba lihlelekile futhi liyalwe ngokwanele ukuze lenze umsebenzi kahle. Khumbula, uma wonke amalungu eqembu ayazi ukuthi umsebenzi uzokwenziwa nini nokuthi yiziphi izinto ezinikezwayo, kukhona amathuba amaningi ukuthi inkampani yakho izozuza ngale ndlela.
Gcina engqondweni, kufanele kube nesistimu ephakathi, ukulandela yonke imisebenzi ye-ejensi. Futhi, qinisekisa ukuthi ukulethwa kwezidingo kucacile futhi kunamanani angaguquki ongawaqonda.
2. Ubani Ozolawula Izinhlinzeko Ngemva kokuba Ngiyekezela Umsebenzi Ku-SEO Reseller?
Uma uphumelela ukuhamba komsebenzi wakho webhizinisi, akusho ukuthi ulahlekelwe ukulawula ngalokho okwenzekayo. Kungenxa yokuthi izinsiza zingasebenza kwenye i-agency akusho ukuthi kufanele ube nethonya elincane kulokho okwenzekayo. Njengoba izinkampani zibuka i-SEO, zifanele zithole iqembu elingu-100% elithandayo futhi elinentshisekelo empindulweni yabo.
Amathimba ane-orientation elandelayo ngeke akwenze uzizwe ungalawulwa. Esikhundleni salokho, bazokugcina ubuyekezwe ngokuqhubekayo. Ubuhlobo obuhle bokusebenza nelebula elimhlophe le-SEO agency lisho ukuthi uhlale ukhululekile ukwenza izinqumo mayelana nokunikezwa kwamakhasimende.
3. Ngabe Ngilindele Noma yikuphi Ukubika Okuvela Ku-White Label SEO Agency?
Yebo, kufanele. Ukubika kuyingxenye ebalulekile yomkhankaso wokukhishwa kwempahla. Imibiko ephakeme kakhulu kanye nezibalo ngamathuluzi anamandla akusiza ekutholeni ukulawula okungaphezulu kokuhamba komsebenzi wakho. Basiza abanikazi bezwe ukuthi baqonde ukuthi konke kuhanjiswa ngesikhathi futhi kwenziwe kahle.
Ngenxa yokuthi i-ejensi ngayinye inendlela ehlukile yokubika, kubalulekile ukuthi ukhulume namalungu eqembu futhi ubone ukuthi isimo se-label se-white SEO sihlangabezana kanjani nezidingo zakho.
Nguwe kuphela umuntu onganquma ukuthi yini efanele wena nebhizinisi lakho. Noma kunjalo, kunezinzuzo eziningi zokusebenzisa i-ejenti esezifezile kakade kokubili: umnotho wesilinganiso nobuchwepheshe obuphezulu bezobuchwepheshe. Ngokusebenzisana nenkampani enjalo, kuzoba lula kuwe ukugxila ekukhuleni ibhizinisi lakho.
Njengoba sesivele sibonakaliswe ama-ejensi amaningi, ukusebenzisa i-label ye-label ye-SEO emhlophe kuyindlela elula yokukhula uma kwenziwa kahle. Kodwa-ke, kufanele ukhumbule ukuthi ukukhuthazwa ngokufanele ngenqubo yokukhetha kuyimfuneko kulolu hambo.
Sithemba, manje uqonda ukubaluleka kokubambisana ne-label ye-label ye-SEO emhlophe Source .